Uyenza njani imigca ye-contour nge-AutoCAD Civil 3D -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Indlela yokudala i-contours ne-AutoCAD Civil 3D
Indlela yokudala i-contours ne-AutoCAD Civil 3D
Kwixesha elidlulileyo edlulileyo, oku bekukho neSoftdesk, elinye ibali, kodwa kulo mzekelo siya kubona indlela yokwenza ngayo AutoDesk Civil 3D ngamathandathu amanyathelo.
1. Izitayela ezingaphezulu
Izitayile zijiyometri kunye nokubonisa useto olwenziweyo kwi-AutoCAD, apho uhlobo lwemigca, imibala, iileya, amagophe agudileyo okanye iimilo ezahlukeneyo eziza kubakho iijometri ezenziwe. Kuba ayisiyiyo imeko yale post, ndiza kusebenzisa ifayile esele inezitayile ezigciniweyo, ekugqibeleni kubonisiwe indlela yokukhuphela le fayile.
Ezi zitala zingabonwa kwaye ziguqulwe kwi "Izicwangciso" ithebhu, zinokuphinda zikopishwe kwaye zenziwe zintsha.
2. Yakha ubuso
Kule nto, kwiphaneli yezixhobo, sikhetha "imiphezulu", ngeqhosha lasekunene le-mouse xa ukhetha "yenza umphezulu". Kwiphaneli sibonisa ukuba luhlobo lomphezulu we-TIN, kwaye sikhetha umaleko apho uya kubanjelwa khona, kwimeko yam ndiya kuyenza kwi-C-TOPO.
Njengogama sinika "indawo ye-Geofumadas" kunye nenkcazo "Indawo yokuvavanya".
Ngokwenza OK siyabona ukuba umphezulu wenziwe, kunye nolwakhiwo lwezinto eziza kulubonakalisa. Inokuhlelwa ngokunqakraza ekunene kumphezulu kunye nokukhetha "iiPropathi zePhezulu".
3. Yongeza idatha kumphezulu
Kule meko, siya kudibanisa ifayile yamaphuzu, ngaphambi kokuba sibone indlela yokwenza ngayo kwi database yangaphandle. Ngoku into endinayo yifayile ye-txt enezilungelelanisi kwifom x, y, z.
Ke ngoku, sisebenzisa ukhetho "Inkcazo", kwaye koku sijonga "Iifayile zeNqaku". Apha sicofa ekunene imouse ngokukhetha "Yongeza".
Kwiphaneli siza kubonisa ukuba le nto siyingenisayo ngamanqaku ngokulandelelana kwe-ENZ Easting Northing Zelevation (X, Y, Z), kwaye yahlulwe ngeekoma. Emva koko sijonga umendo wefayile ye-txt, kwaye senza kakuhle.
Ngaloo ndlela amaphulo alayishwe kwifayili, kodwa ayingenanga kuphela nje njengengqongqelo yamanqaku kodwa asebenze.
Ukuze sibone oku, sichanezela ngokukhawuleza kwi-"Geofumed Terrain", kunye ne-Properties Properties, esiza kubona kwi "Inkcazo" kwithebhu yokuba kwiplanethi engaphantsi ibonakala ngathi isebenza.
Ukubona umphezulu owenziweyo, nqakraza kuyo, kwaye ukhethe "ukusondeza". Kuya kufuneka ubone umphezulu, ngamanqaku abomvu kunye nemigca yokujikeleza emhlophe, njengoko isitayile esisemgangathweni eso.
4. Yenza ulungelelwaniso kwimigca yentaba.
Ngoku, ukubona iifowuni kwesinye isitayela, esiza kwenzayo kukuchofoza ngokufanelekileyo emanzini "iGround Geofumadas", ngoko "izakhiwo eziphezulu" kunye nesebe "Ulwazi" sisebenzisa isitala somhlaba.
Kwimeko yokusebenzisa "iMida kunye neMida", emva koko faka oku:
Kwimeko yokubeka "imida kunye nemida kunye nemithambeka" imigca yokujikeleza iyavela ngemephu yethambeka enemibala.
Zikhona ezinye izitayela, ngoko ndabashiya ukuba zizame.
5. Olunye ulwazi
Kwakhona kunokwenzeka ukuba ubone idatha engaphezulu malunga nomhlaba owenziwe, kwi-"Analysis" ithebhu, rhoqo kwi "Properties Properties" njengetshathi yesahluli yamathambeka, ukhetha uluhlu kwaye ucinezela utolo.
6. Bhala iigophe
Ukulebhelisha imigca nentaba, oko ke kukuthi, ukususela kwi menu phezulu "Surface / Yongeza iilebhile kumphezulu", apha uyakwazi ukukhetha ezinye iindlela ezahlukeneyo, siza kusebenzisa kulo mzekelo "Outline - Multiple" ngoko ke Somzobo onamacala amaninzi eliphawulwe kwaye zokumakisha zobukhulu.
Ukuba ufuna ukwenza umsebenzi, apha ungayilanda:
Ifayile I-txt yamanqaku
I-dwg equle ithemplate
I-dwg nomsebenzi obalaseleyo
AutoDesk 3D civil Dwg egeomates My
AutoCAD Civil 3D, amaphumela angeniso esuka kwisiseko sedatha yangaphandle
ULuis Guzman uthi:
Sebenzisa i-Zoom, kwindlela yokujonga kwandisiweyo, mhlawumbi kungekhona oko ubona kwiskrini.
Ibentle kwaphela. Ingxaki yam ke le nto, ndiya kuyenza inyathelo ngenyathelo kwaye kubonakala kulungile, kodwa xa ndifuna ukubonisa e C3D abone nantoni na, kukuba ifayile apho kodwa kuba kubonakala ngathi zithwele amaqashiso lamanqanaba zadalwa, kodwa ndiyakwazi ukubona okanye khetha nantoni na. Ndiyaqonda ukuba ndiya kuba ezidengileyo kodwa mna ndahlala amileyo. Thanks in advance!
idayisi etafileni (X; Y) i-UTM?
Kukho iifayile zefayile
Heiner Mendez uthi:
Uqeqesho olugqwesileyo, kodwa ifayile yesicatshulwa yamaphuzu aphantsi, unokuyilayisha kwakhona nceda
ALEJANDRO ORTIZ AGUILAR uthi:
Lihle kakhulu iphepha lakho linolwazi oluchanileyo kwaye lungahambelani!
izindlu ze rodolfo uthi:
NAKUBA uthanda, ngokukhawuleza ukuba ndiyenze, ndiya kuphinda ndibulele
Sawubona Leonardo, uthembele kuphela kwiindawo eziphakamileyo.
Sawubona Leonardo, ukuba usichaza kangcono. Kuthetha ntoni ukuba unamanani?
Ngaba ithetha ukuba unamaphupha kwimephu, ngokuphakama, okanye i-xyz izilungiso ngaphandle?
Umhlobo onomdla kakhulu umhlobo wakho kwiphepha kuphela ndithandabuze ndikhangelele Ndifuna ukuthabatha amacengeza endlela kodwa ke ndixhasa kuphela izilungiso zam okanye oko ndikukhethayo kunye neqela eli
Ndingathanda ukwazi indlela yokufumana i-coordinates xyz ??
Kunzima ukwazi ukuba yintoni eyenzekayo kwifayile yakho, ngenxa yokuba phakathi 2010 kunye 2011 kungekho nesalamane utshintsho uye kwisithuba sokusebenza Civil 3D kusenokwenzeka ukuba lwenze data. Kananjalo aniqondi siyazi ukuba iinkcukacha projekthi igcinwe kwi fayile XML okanye iziko ledatha yeprojekthi.
NDANDICINGA UKUBA ESI SITHUBA SASINCEDIWE UKUTHANDABUZA UKUBA UMNTU ANAYO, KODWA NDIYABONA UKUBA AKUNJALO. NGENXA YONYAKA Olandelayo UNGANDIPHENDULA…. ENKOSI, WAMKELEKILE
Molweni, ndicela nindincede, ndifuna ukuba ukuvula ifayile 3D yamakhaya wasebenza kuguqulelo 2011 kunye guaradado iyinguqulelo 2010, kodwa uyise komnye umatshini in version 2010 ukuvula konke ngokupheleleyo, okt, ukwenza iprofayili longitudinal kulo q kumatshini kuye 2011 version, kodwa xa ukuqhuba umatshini na uguqulelo 2010 q akuthethi ukuvula iprofayili umgca emhlabeni, yaye ukususela q sabhalwa in version 2010 kwakhona. Ingaba ngaba ngaba ndenze i-database yangoku? ukuba kunjalo ndikwazi ukunceda njengoko wenza ukuba q kungavula yonke ngokupheleleyo. Ndiyabonga
daniel d uthi:
Abazalwana banomdla omkhulu kunye negalelo endikunika yona
Sawubona umbuzo wam ngulo, kwenzeka ntoni na ukuba ndihlele ukuyila i-guitars yeeprofayili zangexesha elide kodwa andinakwenza ukuba ndiyakongeza kuphela ama-guitars afika ngokungafihlayo kwimihlali. Ngoko ndifuna ukubona ukuba umntu unokundinceda, loo nto ifom yefomati yinto endifuna ukuyifaka ulwazi oluthe xaxa kuma-guitar okanye kumacandelo kwiprofayili kwaye utshintshe ifomathi
Azikho iindlela ezininzi, kuba inkqubo isebenza nedatha oyifumayo kwintsimi.
Sawubona, Kuhle kakhulu isikhokelo siyabonga ..
Kwenzeka ntoni ukuba sele ivelisa iirveve kodwa ke ndinamanqaku akude kakhulu kwaye ngokungagqibekanga inkqubo iyazidibanisa ... Ndingawuchaza njani umgca womphezulu, ukuze umphezulu wam usondele kwinyani?
Sawu, namhlanje ndiphengulula iwebhu kwaye ndifumene le sayithi: http://www.civil3d.tutorialesaldia.com Kukho izifundo ezimbalwa ze-3d zomphakathi, kodwa zikhangeleka kakuhle.
Jose Guevara uthi:
Inqaku elinomdla kakhulu, ndifuna ukwazi ukuba unokunceda ukuba ndihlele ubuso, kwenzeka ntoni ukuba ndifuna ukongeza imigca emininzi kwaye inkqubo ayiyi kubakho okanye ayivumeli. Makhe sibone isisombululo esindicebisa ngayo
Pedro Gomez uthi:
Inkqubo okanye ikhosi yeCourour ... Ixabiso kwiiBolivares
Ndi thumele iindleko zeprogram
Ndifuna ukwazi ixabiso kwiBolivares yeNkqubo
Ndithumele ixabiso lekhosi
Ixabiso elingakanani leNqanaba loKhuseleko lwee-Autocad Level curves 2010-2011
Nceda, uninzi kangakanani ikhosi ye-autocad 2010-2011 kunye nencwadi epheleleyo yokufundisa ye-2010-2011 nceda? Siyabonga
molo .. inkxaso !!… .inkxaso !! Ndingawusika njani umphezulu womhlaba ukuze ulunge kwisangqa, awuqhusheki nge-X, kwaye enye indlela yokuhlela imigca yokujonga ukuba uyisebenzisa njenge-polyline… enkosi… inkxaso guys !!! pa los bravos del civil3d
jonathan sanchez tantalean uthi:
Ndifuna into malunga nemigca yokutya (imigangatho)
Nawuphi na owaziyo ukuba ndifumanaphi ividiyo kwividiyo evela kwi-3d 2010 yaseburhulumenteni?
Le nxalenye yento ochaza ngayo kwithemplate, kwisitayela somhlaba, kwiintambo, ukhetho lwangaphakathi lwexesha.
Ixesha elifutshane kunye nexesha eliphambili, uchaza ukuba ufuna kaninzi kangakanani ikhefu eliphambili kunye nekhasi lesibini.
Khangela esi sithuba
Ndingayifaka njani umgama phakathi kwemida yecala? ???????????????
ps q bakholelwa le planito yonke le manzi kwaye ukuba ndifuna ukuba zemitha 2 apho uyakwazi uguguqula kancincane ukuba ?????????????????????????
En esi sithuba Ndibonisa indlela yokuguqula iipollines ukuya kutsho
Uxolo malunga naluphi na uluvo olutshintsho lwepolyliyali kumbuzo wokungqubuzana lo wam imeyili..mendezgeomen @ gmail.com..
Ndinombuzo, bathetha ukuba kunokwenzeka ukutshintsha isitayela okanye ifomati ye-polyline kumnye obizwa ngokuba ngumncintiswano, oku kungenxa yokuba okwesibini kukhanya kakhulu ukusebenzela abantu.
I unefayile yemigca nentaba ukuba babe impahla Somzobo onamacala amaninzi, ngoku ixhala lam ukwazi njani ukuba ifayile iya atshintshe ubunini ezi polylines ngoku kuba nentaba kwaye trabjo ezi lula, kodwa ke musa ukuba singalahlekani ixabiso ledayimenshini ukuba nelifa
Daniel Escobar uthi:
Mhlobo onobubele, ndithatha njani iinqanaba eziphambene zomgwaqo kwaye ndibale iindawo kunye nemiqulu
Ewe andazi, ukuba iifayile yefayile yefayili ye-Windows, ungayivula nge-Adobe Illustrator, kwaye uyithumele kwi-dxf.
Ukuba uthe ufana nebhokisi, ingenxa yokuba unokuyibona kwi-AutoCAD?, Ukuba kunjalo, kwaye uyisebenzise ngomyalelo xplode Ingaba ikhefu ngalinye liphakamileyo?
Ngokuphambene noko, ukuba yi-wmf esebenze neWideLands, kunzima kakhulu.
Molo, upapasho oluhle kakhulu, ndiyavuyisana nawe! Ndingathanda ukwazi ukuba ingaba. enkosi kakhulu kwangaphambili
Sawubona uMatso, ekupheleni komzekelo kubonakala isiqhagamshelo sokukhuphela ifayile ye-txt equle izilungelo zomsebenzi.
Ndicinga ukuba uthetha oku.
mario alexis uthi:
Ndiyabulela yonke iminikelo, kodwa ndingathanda isiseko sedatha apho benza umzekelo ukuba umntu uthanda ukwenza lo msebenzi, ndiyishiye i-imeyile maherrerahn@gmail.com
Igalelo elilungileyo kakhulu landinceda kakhulu
Siyabulela umnikelo omkhulu, enye ingaphezulu kweeofofadada
Sawubona, ndifuna umntu ondibancedise ukwenza imizila engqameneyo kwi-autocad malunga nokubekwa kwesitishi, umsebenzi weyunivesithi, ndivela kuQuito ngolwazi olungakumbi canchig.vaca@hotmail.com
unako ukuwahlanganisa kunye nomyalelo oqhumayo
HEY UMHLOBO, ndadala EMVA amagophe endinokuyenza AMANDLA Hlela ngabanye nonke, AS ukukhetha naphi KODWA Bawathabatha onke UMFANEKISO LINE.
Gaston Uhrig uthi:
Ukugqwesa, kuye kwaba luncedo kum.
Ndingayifumana phi idatha yokuphucula imigca yam yendlela….?
Ndiyabulela ngolwazi ndibenakho ukudala imigca yokulandelana, ngokulandela inkqubo
Unokwenza imodeli yedijithali ngeendlela ezimbini:
1. Ukuba abakunike yona yayiyi-tif eneempawu zokuphakama, kuya kufuneka ukwenze ukusuka kwindawo esekhohlo ye-civil 3D, kwi-prospector tab, cofa ekunene kumphezulu, kwaye ukhethe u-“dala umphezulu kwi-dem”, kwaye nalapho uya khona. ukukhetha ifayile yakho ye-tif.
2. Ukususela kumgca welayini onayo, njengoko ezi zinto zinezixhobo ze-3D, udala amaphuzu. Ngenxa yoko uya ku:
-Iimpawu, ukudala amaphuzu. Emva koko wandise iphaneli evulela kuwe, kwisicitco ngakwesokudla,
-Cacisa "kwindalo yamanqaku", khawuleza ukusuka kwiindawo eziphakamileyo (ozenzekelayo) kunye nokukhawuleza kwenkcazo (akukho nanye).
-Emva koko ukhetha ukhetho lokudala amanqaku ahlukeneyo, kwi "automatic" ukhetho kwaye uya kucelwa ukuba ukhethe imigca. Kufuneka ukhethe ezimbalwa kuphela ukuvavanya ukuba iphuma njani.
Xa ukhetha ukusuka kwiipaneli zamanqamfa ezisekhohlo, ezo zidalwe kunye ne-x, y, z zenzelwe ukuba ziboniswe ngezantsi. Ngale ndlela unokwenza imodeli yedijithali njengoko kuchazwe kule post.
Ungalanda ifayile ukusuka apha http://www.megaupload.com/?d=FA1IN3V0
Ndazama ukukhuphela ifayile ukusuka apho uyilayishe khona kwiRipidshare, kodwa indiphosa ngomyalezo wephutha.
enye into engingayithethiyo kukuba banginika ifayile i-dwg, i-orthophoto kwandiso * .tif kunye nefayile yokwandisa * .tfw
into engayithethiyo kukuba nditsha kwi-Civil 3D, Ndingumsebenzisi we-Autocad, kodwa kungekhona yombutho we-Civil 3D
Iposi elihle kakhulu, ndifuna nje kukukhathaza ngale ndlela ilandelayo:
Ndingayenza njani imizila engqamene negridi ebonelelwe ngumbutho welizwe lemihlaba (iGuatemala), ndifake iqhagamshelo apho ungayilanda khona:
Xa ubona ifayili, umgca nganye coordena awo xyz, indawo ukudala ezigoso kumba kakhulu, zama kunye topocal kodwa complico, kususela PC ebesoyika.
Naluphi na uncedo oluya kulubulela.
Umbulelo womhlobo womncedi ngegalelo landincede kakhulu, uyazi ukuba ungayifaka njani iphrofayili yombombo kwinqanaba lembambano ngokubonga kwangaphambili
I-3D yoLuntu yi-AutoCAD kunye nemisebenzi eyongezelelweyo yoBunjineli boLuntu kunye neCrographic.
Akukho kwimigaqo yale blogi ukukhuthaza ubugqirha ngokukhuphela isofthiwe.
Ndiyazi ukuba i-autocad i-2008 iyahlukileyo kwi-autocad ye-3d kunye nokuba kunjalo, apho ndikhuphela i-3d
Enkosi, kuluncedo olukhulu ukuphucula uyilo lwemisebenzi yobume bendawo …………
Molo, ndifuna ukufumana izimbo ze-autocad civil 3d zokusebenzisa okungagqibekanga kwaye ndingaziqwalaseli izitayile ngalo lonke ixesha kusenziwa iprojekthi ... enkosi
Ariel Silva uthi:
Kulungile isifundo ... kodwa, usebenzisa isihloko:
Indlela yokwenza umgca wendlela ocacileyo ukucacisa ukuphakama ngokucacileyo?
Webinar: 5 zinto zixabisekileyo ntoni software CAD